ထိပ်ပြောင်သူ၊ ဆံပင်ကျွတ်လွယ်သူ၊ ဆံပင်ပါးသူများအတွက် အလွန်ထိရောက်ပြီး လွယ်ကူတဲ့ ဆေးနည်း
December 26, 2021 sonsonlinlin 0
ထိပ်ပြောင်သူ၊ ဆံပင်ကျွတ်လွယ်သူ၊ ဆံပင်ပါးသူများအတွက် အလွန်ထိရောက်ပြီး လွယ်ကူတဲ့ နည်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ ၃-၄ တက်လောက် ယူပြီး အခွံခွာပြီး အလယ်က ထက်ခြမ်းခြမ်းပါ။ ပြီးရင် ခြမ်းထားတဲ့အပိုင်းကို ဦးရေပြား ဆံပင်ပါးတဲ့နေရာတွေ လိုက်ပွတ်ပါ။ နာရီဝက်ခန့် ထားပြီး အုန်းဆီကို လက်နဲ့ လိမ်းပေးရမယ်။ အာနိသင်ကောင်းဖို့ vitamin E oil ၅ စက်လောက်ထည့်သင့်တယ်။ အုန်းဆီလိမ်းတဲ့အခါ ဆံသားအခြေကနေ အဖျားသို့ နှံ့အောင် လိမ်းပေးရမယ်။ […]
မိန််းကလေးအလှ အိိပ်ယာထ၏ အဓိပ္ပါယ် (မသိသေးသူများရှယ်ထား)
မိန်းကလေးအလှ အိပ်ယာထ၏ အဓိပ္ပါယ် (မသိသေးသူများရှယ်ထား) မိန်းကလေး အလှ အိပ်ယာ ထ တဲ့။ ဒီ ဆိုရိုးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မသိတဲ့သူတွေ ရှိနေကြ ပါလိမ့် မယ် ။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အဆိုအရ မိန်းကလေး ရယ်လို့ ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီ ဆိုရင်အရွယ်ရောက် လာလို့ အိပ်ယာနိုးတဲ့ အခါမှာ ကိုယ် လက် သန့်စင်မှုနဲ့ အစပြု ရပါ တယ် ။ ထို့နောက် […]
ကားစီးရင္ မူးတတ္သူမ်ားအတြက္ အလြယ္ကူဆုံးနဲ႔အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္း
ကျတော်ငယ်ငယ် ကားစီးရတာကြိုက်ပေမဲ့ အသက်20 လောက်မှာ ကားစီးရင် ကားမူးလာပါတယ် ကားမူးတက်တဲ့ ကျတော့သောက်ကျင့်ကို ကျတော်လွန်စွာမှမုန်းပါတယ် ကားစီးရင်ကားမူးပျောက် ဆေးသောက်ရပါတယ် မသောက်ဘဲကားစီးမိရင် လူကမူးမော့နေတာ တစ်နေ့ ကျတော်မန်းလေးသွားတော့ ကားမူးသောက်ဆေးသောက်တာ မသက်သာဘဲ ဖြစ်နေတာ မူးချက်ကတော့ လက်ကုန်ပါဘဲ ဖြစ်ချင်တော့ ကျတော့ဘေးကကျတော်ဆရာမ ဒေါ်သန့်သန့်ဝင်းက လိုက်လာတာပါ ဆရာမကပြောတယ် ကားမူးရင် ဖယောင်းတိုင် ရင်ဘက်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ လုံးဝကောင်းတယ် လက်တွေ့တဲ့ ဆရာမပြောပြောချင်းတုန်းက နည်းနည်းကြောင်သွားတယ် ကားမူးတာနဲ့ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ […]
သိက္ခာရှိအောင်နေ မေတ္တာရှိတဲ့သူတွေ မင်းဘဝထဲရောက်လာလိမ့်မယ်…
သိက္ခာရှိအောင်နေ မေတ္တာရှိတဲ့သူတွေ မင်းဘဝထဲရောက်လာလိမ့်မယ်။ တန်ဖိုးရှိအောင်နေ ၊တန်ဖိုးမသိတဲ့သူတွေသူဘာသာ ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာဂရုစိုက် ရိုးသားခြင်းထက်ပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးဖို့ကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူး။ လောကသဘောက ရှင်းရှင်းလေးကိုယ်လုပ်တဲ့ ကောင်းကံ ဆိုးကံနောက်ဆုံး ကိုယ်ပြန်ခံရတာပဲ~။ #အရှင်ဇဝန(ရွှေလင်းယုန်) မာနတွေ သိပ်မထားပါနဲ့ …မထားသင့်တဲ့ မာန်မာနကသင့်ကမ္ဘာကို ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။ လူတွေကို အပြုံးနဲ့ စတင်နှုတ်ဆက်ဖို့ဘယ်တော့မှဝန်မလေးပါနဲ့အပြုံးတွေကတစ်ဖက်လူကို ပျော်ရွှင်စေသလိုကိုယ်တိုင်လည်း ပီတီ ဖြစ်စေတယ်။ လူတိုင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာဆိုတာအမြဲရှိပြီးသားပါ သင့်တစ်ယောက်တည်းမပျော်ရွှင်ပဲ ဝမ်းနည်းနေရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘဝဆိုတာ ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုလို့မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက် ခေါင်းနဲ့ ပန်းလို့ပါပဲအဆိုးတွေပြီးရင် […]
သင်မသိသေးတဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပြီးရေမသောက်သင့်သည့်အကြောင်းအရင်း ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို ရေ(၈)ခွက်သောက်တာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက ရေသောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ သောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာပါပဲ။ လူတော်တော်များများဟာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်ပြီး မသိရှိကြသလို သတိလည်း မထားမိတတ်ကြပါဘူး။ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ရေသောက်တဲ့အခါမှာ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားနဲ့ မသောက်သင့်ဘူးဆိုတာကို အံ့အားသင့်စွာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁။ အဆစ်ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြင့် ရေသောက်တဲ့အလေ့အထဟာ ကြာလာတဲ့အခါမှာ အဆစ်ရောင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ […]
မုန့်စိမ်းပေါင်းရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို နိုင်ငံခြားသားကြီးက ဘာတွေရောင်းတာလဲလို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
မနက်စောစော နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်မန္တလေးဘူတာကနေဆင်းလာတယ်။ သူ့မှာပါလာတဲ့ ကင်မရာနဲ့ မုန့်စျေးတန်းကြီးကိုတဖျပ်ဖျပ် ရိုက်တာပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ မုန့်စိမ်းပေါင်းအတုံးကြီးကိုတွေ့တော့ရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို နိုင်ငံခြားသားကစိတ်ဝင်တစား မေးတယ်။ “What is this ? ” အဒေါ်ကြီးမော့ကြည့်ပြီး အူတူတူနဲ့ ပြန်ဖြေတယ်။ “မုန့်စိမ်းပေါင်း ” “I don’t like ”လို့ နိုင်ငံခြားသားကပြန်ပြောတော့အဒေါ်ကြီးကလဲ “အတုံးလိုက်မဟုတ်ဘူးလေ၊ ဖဲ့ရောင်းတာ….” “Oh ! ! No. .” “ဟာ အုန်းနို့ […]
သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖြူဖွေးလာအောင် ဆေးနည်းသစ်တခုပေးပါရစေနော် …။ သုံးရက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်နဲ့ကို သင့် အသားအရေ ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ် …။ အထူးသဖြင့် နေလောင်ထားတဲ့ ခြေ၊လက် အသားအရေအတွက် ဒီနည်းက အသုံးဝင်လွန်းပါတယ်။ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အသားအရေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးချင်တယ် ဆိုရင် အဆင့်(၂)ဆင့် ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ပထမအဆင့်က ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။ scrub လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်က ခြေလက်တွေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးလာအောင် […]
Brightening ဖြစ်စေတဲ့ Skincare တွေနဲ့ အသားအရေကြည်စေတဲ့ Glow စေတဲ့ Skincare တွေအများစုက ဆန်နဲ့လုပ်ထားတာတွေပါ။ ဆန်ဆေးရည်က အလှအပရေးရာအတွက် အရမ်းအကျိုးပြုပါတယ်။ အဓိကကတော့ မျက်နှာလေးကို သိသိသာသာဖြူပြီး ကြည်လာစေတယ်။ တချို့က ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာသစ်ကြတာ မျက်နှာလေးဖြူပြီး ကြည်လာတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဆန်ဆေးရည်နဲ့သာ မျက်နှာပေါင်းလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ မျက်နှာအသားအရေလေး ကြည်ပြီးဖြူလာမယ့်အပြင် အသားအရေလည်းချောမွတ်ပြီး အိအိလေးဖြစ်လာမှာပါ။ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ဖို့အတွက် ပန်းကန်ထဲကို ဆန် – […]
စိတ်မော၊ လူမောနဲ့မင်္ဂလာဦးညက ဖြစ်ရပ်ဆန်း
နှစ်ဖက်မိဘ သဘော တူညီမှုနဲ့ အိမ်ထောင်ပြု ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။လာသမျှလူတွေကို ပြုံးပြရတယ်။ သိသိမသိသိ နှုတ်ဆက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီး ပြီး သွားတယ်။စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ ။ ငယ်သူငယ်ချင်း ယောကျာ်းတွေက ‘ခဲဖိုး’ တောင်းတယ်၊ငယ်သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေကတော့ ‘ရွှေကြိုး’ တားကြ တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မငြင်းဘူး။ ပေးစရာရှိတာ ပေးလိုက် တ ယ် ဒါမှ မင်္ဂလာဦးရဲ့ညဦးမှာ လူရှင်းတော့မှာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ ညရောက်လာတယ်။ဒီနေ့ညက အရမ်း တန်ဖိုး […]
တင်ပါးယား၍ ကုတ်မိရာမှ နေ့ချင်းညချင်း ဘဝပြောင်းသွားရသည့် မိန်းကလေး။ကျွန်မ၏ တင်ပါးကို ယားလွန်း၍ ကုတ်မိသည်။ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဘေးမှာရှိသည် ။ တစ်ယောက် က မော်လီ တစ်ယောက်က ခင်မြရည် ဖြစ်သည်။ ကျမ ယားလို့ တင်ပါးကုတ်မိတဲ့ အခါ သူငယ်ချင်း မော်လီက ဓာတ်ပုံ ဖျတ်ခနဲ ရိုက်ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့၊ ပလွတ် ဆိုပြီး အင်တာနက် ချိတ်ပြီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ် တင်ချလိုက်သည်ကျမ တို့ […]